ငရဲမီးအိုင်ထဲကငိုကြွေးသံလေးမျိုး | Four Cries from Hell | Real Conversion
၂၀၁၂၊ဩဂုတ်လ ၅ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်
“မရဏာနိူင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံရလျှက်၊ မျှော်ကြည့်၍၊ အဗြဟံ ကို၎င်း၊ အာဗြဟံ၏ရင်ခွင်၌ လာဇရုကို၎င်း၊ အဝေးကမြင်လျှင်၊ အိုအဘ၊ အာဗြံဟံ၊ အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနားတော်မူပါ”
ဤတရားဒေသနာတော်ကို ဒေါက်တာ.ဒဗလျူး ဟာဆယ်လ်ဖေါ့ဒ်၏ “အပယ်ငရဲ ထဲသို့ အလည်တခေါက်”ဟူသော တရားဒေသနာတော်မှ ကိုးကားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (Simple Sermons on Salvation and Service, Zondervan Publishing House, 1971 edition).
ငရဲထဲသို့ရောက်ရှိခဲ့သော သူတစ်ယောက်ရှိပါသည်။ အခုဆိုလျှင် ထိုသူသည် မိမိ တွေးထင်ခဲ့သော ဝေဒနာထက်ပိုပြင်းထန်သော ဝေဒနာကိုခံစားနေပေပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြသည့်အတိုင်း “အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ” ဆိုခြင်းသည် “ကယ်မသနား တော်မူပါဟု အော်ဟစ်ငိုကြွေးခြင်း”ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဒီကနေ့ည၊ ကျွန်ုပ်တို့ငရဲကို သွားကြည့်မယ်ဆိုလျှင်၊ ထောင်ပေါင်းများ စွာသော ဝိညာဉ်များတို့၏ ငိုကြွေးသံကို ကျွန်ုပ်တို့ကြားရကြမည်ဖြစ်သည်။ “ငိုကြွေးခြင်း အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာ၊ မီးဖို၌ချကြလတံ့” (မဿဲ၁၃း၄၂)။ ကျွန်ုပ်တို့ငရဲထဲသို့ သွားရောက်ကြပြီး မီးငရဲကဝိညာဉ်များစွာတို့၏ ငိုကြွေးအော်ဟစ်သံတို့ကို စိတ်ကူးယဉ် ကြပါစို့။
၁။ ပထမ၊ “အကျွန်ုပ်၏အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော” ဟု ဆိုသော၊ ကာဣန၏ ငိုကြွေးသံ၊
သူသည်မဖြေသိမ့်နိုင်အောင် ငိုကြွေးနေမည်။ “အကျွန်ုပ်၏အပြစ်သည်မဖြေနိုင် အောင်ကြီးပါသလော” (ကမ္ဘာ၄း၁၃)။အဘယ်ကြောင့် ကာဣနသည် မီးငရဲထဲငိုကြွေးရသ နည်း? လူအသက်ကိုသတ်မိ၍ မဟုတ်နိုင်ပါ၊ မောရှေလည်း လူ့အသက်ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ သူဖြစ်သည်။ သို့သော် သူသည်ယခုတွင် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထာ၀ရအသက်ရှင်နေပါသည် ဒါဝိဒ်လည်း လူ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့ပါသည်၊ သို့သော် သူသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေပါ သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်း လူ့အသက်ကိုသတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်သူသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ကာဣနသည် ငရဲမီးအိုင်ထဲ ထာ၀ရငို ကြွေးရသနည်း “အကျွန်ုပ်၏အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင် ကြီးပါသလော”? အဘယ် ကြောင်းနည်း? ကာဣနသည် ငရဲ၌ ငိုကြွေးနေရပြီး အဘယ့်ကြောင့် အချို့သောလူ သတ်သမားတို့မူကား ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိ ရကြသနည်း?။
ကာဣနသည် ငရဲမီးအိုင်ထဲရောက်ရှိရခြင်းသည် အသွေးတော်အားဖြင့် ရွေးနုတ် ကယ်တင်ခြင်းကို ငြင်းဆန်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကာဣနပူဇော်သော၊ ပူဇော်သက္ကာ ၌အသွေးမပါသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည်မိမိကိုကို ကောင်းမှုကုသိုလ်အားဖြင့် ရွေး နုတ်ဖို့ ကြိုးစားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထာ၀ရဘုရားသည် ထိုသူ၏ ပူဇော်သက္ကာကို ငြင်းပယ်တော်မူခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲ အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိ” (ဟေဗြဲ ၉း၂၂)။
လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော်သည် မဖြောင့်မတ်သော သင့်အပြစ်တို့ကို ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့ရန် ခရစ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထာ၀ရမီးငရဲထဲက လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းကား ခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏ အသွေးတော် အားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ကာဣနမူကား၊ မိမိကိုကို အထင်ကြီးပြီး အသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထိုအတွက်ကြောင့် ကာဣနသည် ယခုတွင် ငရဲ၌ရှိနေခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် “အကျွန်ုပ်၏ အပြစ်သည်မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော” ဟူ၍ ကြီးစွာသော ဝေဒနာကို သူသည်ငရဲ၌ အမှန်ခံစားခဲ့ပါသည်။
တရားဟောဆရာကြီးက “သင်၏မိဘကို ရိုသေစွာပြုလော” (ထွက်၂ဝး၁၂)ဟူ သော ပဥ္ခမမြောက်ပညတ်တော်အကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုတရားဟော ဆရာကြီးသည် မိဘတို့ကို မုန်းတီးသော အပြစ်အကြောင်းကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ လူငယ် သုံးယောက်တို့သည်လည်း ထိုပညတ်ချက်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါသည်။ သုံးယောက်ထဲက နှစ်ယောက်သည် မိဘထံသို့ပြန်သွားပြီး မိမိမှားယွင်းကြောင်း ဝန်ခံ ခဲ့ကြပြီးသာ၍ ကောင်းမွန်သော လူနေမှုကို စတင်ရန်ဂတိပေးခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ဆုံး သော တစ်ယောက်မူကား ယေရှုသခင်ထံ မိမိ၏အပြစ်ကို ဖေါ်ပြပြီးအသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပြီး နောက်သူ့ဖခင်ထံသို့ သွားရောက်အမှားကို တောင်းပန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်ဆုံးသော လူငယ်လေးကသာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်နှစ်ယောက် မူကား ဝိညာဉ်ပျောက် ဆုံးဆဲဖြစ်၍ စိတ်မာလျှက် ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း? “သွေးမသွန်းလောင်းဘဲ အပြစ်လွတ်ခြင်း မရှိ”ဟူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(၁၈၂၆-၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ ရောဘတ်လော်ရီ သီကုံးရေးသားသော
အပြစ်အကျိုးအဆက်မှ လွတ်မြောက်ခြင်းအလိုငှါ၊ လူအများတို့သည် မိမိတို့၏ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုသာ အားကိုးကြသည်။ အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲ အပြစ်လွတ်ခြင်းမ ရှိသဖြင့် ကာဣန၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းလမ်းစဉ်သည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ခဲ့ရသည်။ မိမိတို့၏ အပြစ်ငရဲမှ လွတ်မြောက်ဖို့ရန် ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူသည် ကာဣနနှင့်အတူ ငရဲ၌ ဝေဒနာခံစားရကြမည်ဖြစ်သည်။ “အကျွန်ုပ်၏ အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော”။
“မရဏာနိုင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသောဝေဒနာကို ခံရလျှက် မျှော်ကြည့်၍ မီးလျှံ၌ ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်.. အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ” (ရှင်လုကာ ၁၆း၂၃-၂၄)။
၂။ ဒုတိယ၊ “ဝင်ခွင့်ပြုပါ! ဝင်ခွင့်ပြုပါ!” ဟု ဝင်ခွင့်တောင်းခဲ့ကြaသော နောဧ ခေတ်တုန်းက လူတို့၏ ငိုကြွေးသံ
နောဧခေတ်လူတို့သည် ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးသူများ ဖြစ်ကြပါသည်၊ နောဧမူကား ရေလွမ်းမိုးသောအခါ မိမိတို့မိသားစုအား ကယ်တင်လိုသောငှါ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ယုံကြည်ခြင်း သဘောFတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ နောဧသည် သင်္ဘောကြီးကို တည် ဆောက်ဖို့ရန် တရားဟောအသိပေးခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ပေတရုက နောဧအား “ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဟောသူ” (၂ပေ၂း၅)ဟူ၍ ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် လူအများတို့ ကနောဧအား သယော်ပြောင်လှောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် ရေလွမ်းမိုးလောက်အောင် မိုးကြီးရွာသွန်ခဲ့ခြင်း ဘယ်တော့မှ မသိခဲ့ကြပါ။ ထိုနောက် ရေသည် ကြီးလာပြီး၊ မကြာ မှီ ရေသည်ကမ္ဘာကြီးကို လွှမ်းမိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ မယုံကြည်သော သူတို့သည် သင်္ဘောကြီးဆီသို့ အပြေးအလွှားပြေးခဲ့ကြပြီး၊ သင်္ဘောအဝင်တံခါးကို ခေါက်လျှက်၊ “ဝင်ခွင့်ပြုပါ! ဝင်ခွင့်ပြုပါ!ဟု ခွင့်တောင်းခဲ့ကြမည်ကို သင်သံသယမရှိပါနှင့် သို့သော် လည်း ထိုသူတို့သည် သင်္ဘောထဲသို့ ဝင်ရောက် ရန်နောက်ကျခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်! သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ နောဧအားမိန့်တော်မူသည်ကား “နောဧကိုအထဲမှာ ပိတ်ထားတော်မူ၏” (ကမ္ဘာ၇း၁၆)ဟူ၍ ကျမ်းစာ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထာ၀ရဘုရားက ၎င်းသင်္ဘောကြီး၏ တံခါးကို တံဆိတ်ခတ်လျှက် ပိတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန် နောက် ကျနေပြီဖြစ်သည်။ ထိုအခါ လူအပေါင်းတို့သည် ရေထဲ၌နစ်မြှပ်ခဲ့ကြရပါသည်။
ဤမျှလောက်သော လူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ခေါ်တော်မူခြင်းအား ကြာရှည်စွာ တွန်းလှန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် တီးလျှက်မှုတ်လျှက် ကခုန်ပျော်ပါး၊ မြူးထူးခဲ့ကြ သည်။ မိမိတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ၏။ ကနေ့ည ထိုသို့သော သူတို့နှင့် တူသောသူ ရှိကြပါသလား?
သိပ်မကြာသေးခင်၊ လူအုပ်၂၀၀လောက်ကို ကျွန်ုပ်တရားဟောခဲ့ပါသည်။ လေး ယောက်သို့မဟုတ် ငါးယောက်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ ကျန်သော လူအုပ် တို့သည် မိမိတို့၏ အကျိုးစီးပွားရေး အားကစားနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အစီစဉ်၌သာ စိတ်ဝင် စားကြလေ့ရှိပါသည်။ ဤသည် ယနေ့ ကမ္ဘာ၏ပုံရိပ်လည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာသူ^သားတိုင်းအား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြားနေပါသည်။ ထိုသူတို့ကို သတိပေးနေပါသည် ခရစ်တော်ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်း ကမ္ဘာသူ^သားတို့အား ဟောပြောနေပါသည်။ အများသော သူတို့သည် ကယ်တင်ရှင်ကို မကိုးစားကြဘဲ၊ မိမိတို့စိတ်ကျေနပ်ရာသို့ သွားနေကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် “လူသည် တခါတည်းသာသေ၍ ထိုနောက်မှ တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို ခံရကြမည်” (ဟေဗြဲ ၉း၂၇)ဟူသော နုတ်ကပတ်တော်ကို မေလျှော့နေကြပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းမရဘဲ၊ ကွယ်လွန်သွားမည်ဆိုလျှင်၊ သင်သည်လည်း မီးငရဲထဲ၊ နောဧခေတ် လူတို့နှင့်အတူ ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ “ဝင်ခွင့်ပြုပါ! ဝင်ခွင့်ပြုပါ! ဝင်ခွင့်ပြုပါ! သို့သော် သင်သည်နောက်ကျနေပြီဖြစ်၍ မီးငရဲ၌သာ ဝေဒနာ ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းတံခါးသည် သင်၏ထာ၀ရအသက်အဖို့ အထူးသ ဖြင့် ပိတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
“မရဏာနိုင်ငံ၌ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံရလျှက် မျှော်ကြည့်၍... မီးလျှံ ၌ ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်... အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါ”
၃။ တတိယ၊ “အပြစ်မရှိသော သူ၏အသွေးကို အပ်မိပြီ”ဟု ဆိုသောယုဒရှကာရုတ် ၏ ငိုကြွေးသံ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိစိတ်နှလုံးဖြင့် ငရဲအိုးထဲ ရောက်ရှိသွားသောအခါဝယ်၊ ထိုအခါ ယုဒရှကာရုတ်၏ “အပြစ်မရှိသောသူ၏ အသွေးကို အပ်မိပြီ”ဟူသော ယုဒ၏ငိုကြွေးသံ ကိုကြားရကြမည်ဖြစ်သည်၊ (မဿဲ၂၇း၄)။
ယေရှုသည် တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ယောက်အဝင်၊ ထိုသူကို ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည် ယုဒရှကာရုတ်သည် ယေရှုနှင့်အတူ သုံးနှစ်အတူရှိနေခဲ့ပါသည်။ ယုဒသည် ယေရှု ဟောပြောသံကို အမြဲကြားပါသည်။ ယေရှု၏ အံ့ဩဖွယ် နိမိတ်လက္ခဏာကိုလည်း
မြင်ခဲ့ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် ယုဒသည် မယုံကြည်သောကြောင့် ငရဲထဲသို့ကျ ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
သင်သည်လည်း အပတ်စဉ်ဘုရားကျောင်းသွားပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း အစဉ် တစိုက်ဝေငှနိုင်ပါသည်၊ ရက်ရောစွာ ပေးကမ်းပါသော်လည်း ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံးနေ သူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ သင်သည် ယေရှုကိုဘယ်တော့မှ မကိုးစား ဘယ်တော့ မှလည်း အသက်တာမပြောင်းလဲ၍ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်း သဏ္ဍာန်ပြုပြင်ပြောင်းပဲဖို့ ဘုရားသခင်ကသာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ သင်သည်အသစ်တဖန် မွေးဖွါးဖို့လိုပါသည်။
ယုဒသည် ငွေကိုတပ်မက်လိုချင်သောကြောင့် သူ့၏ထာ၀ရအသက်ကိုရောင်း လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သူရရှိခဲ့သော ငွေအားဖြင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို မပေးစွမ်း နိုင်ပေ၊ သူသည် ခရစ်တော်ကို သစ္စာဖေါက်ပြီးရရှိခဲသော ငွေကိုလွင့်ပစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထာ၀ရအသက်သည် နောက်ကျနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်အရှုံးပေး လက်မြောက် လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲချ အသေခံလျှက်၊ ထာ၀ရ မီးငရဲထဲသို့ သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ “အပြစ်မရှိသော သူ၏အသွေးကို အပ်မိပြီ” “အပြစ်မရှိသော သူ၏အသွေးကို အပ်မိပြီ” ဟူသော မီးလျှံမီးတောက်ထဲက ယုဒ၏ အသံကို ကျွန်ုပ်ကြားနိုင်ပါသည်။ ယုဒသည် ထာ၀ရအသက်ရရှိဖို့ အချိန်ရှိခဲ့သော်လည်း ယ္ခုတွင် နောက်ကျခဲ့ရပြီဖြစ်ပါသည်။
“မရဏာနိုင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံရလျှက် မျှော့ကြည့်၍...မီးလျှံ ၌ပြင်းစွာခံရသောကြောင့်... ကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတော်မူပါ”
၄။စတုတ္ထ၊ “သင်သွေးဆောင်သောအားဖြင့် ငါသည် ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်လုပြီ” ဟူသော အဂြိပ္ပမင်းကြီး၏ ငိုကြွေးသံ
သူသည် “ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ! ဟူ၍ ငိုကြွေးအော်ဟစ်ခဲ့သည်။ ယ္ခုဆို လျှင်၊ သူသည် မင်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ၊ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ၎င်းမင်းကြီးအား သက်သေခံဝေငှခဲ့ပါသည်။ သို့သော်၊ သူသည် ခရစ်တော်ကို လက်ခံဖို့ငြင်းပယ်ခဲ့ပါသည်၊ မင်းကြီးက ရှင်ပေါလုအား “သင်သွေးဆောင်သောအားဖြင့် ငါသည်ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်လုပြီ” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည် (တမန် ၂၆း၂၈)။ သူသည် ခရစ်ယာဉ်တစ်ဦးဖြစ်လု သော်လည်း အထူးနောက်ကျနေပေပြီ။
ထိုမျှလောက်ကြားနာကာဖြင့် ခရစ်ယာဉ်တဦးမဖြစ်နိုင်၊ ထိုမျှလောက်၊ စိတ်နှလုံး သားထဲ ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာဉ်မဖြစ်နိုင်၊ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ မိမိကိုကို ခရစ်တော်ထံ ဆက်ကပ်အပ်နှံရမည်၊ ယေရှုသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရပါမည်။ အဂြိပ္ပမင်းကြီးသည် ယေရှုသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားလောက်အောင် စိတ်နှလုံးအသစ်ပြု ပြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သို့သော် အထူးပင် ထာ၀ရအဖို့ နောက်ကျခဲ့ရပါပြီ၊ ထိုကဲ့သို့ လူ့အများ တို့သည် မိမိတို့၌ ပြောင်းလဲရန်အချိန်ရှိနေသော်လည်း နှောင်ကျခဲ့ကြရသည်ကို တွေ့ရ ပါသည်။ ထိုသူတို့သည် စိတ်ဝင်တစား တရားဒေသနာတော်ကို နားထာင်ကြပါသည်။ အချို့ဆိုလျှင်၊ မိမိအပြစ်အတွက် ငိုယိုသည်အထိ တရားဒေသနာကို နားထောင်ကြပါ သည်။ သို့သော် စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ဖို့ တုံ့ဆိုင်းကြပြီး ကယ်တင်ခြင်းကို မေ့လျှော့ ကြပါသည်။ အဂြိပ္ပမင်းကြီး၌လည်း ထာ၀ရအသက်ရရှိဖို့ အချိန်များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အထူးပင်နောက်ကျ ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ “ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ!” ဟူသော အဂြိပ္ပ၏ မီးငရဲ၌ အောင်ဟစ်သံကို ကျွန်ုပ်ကြားနေပါသည်။ ထာ၀ရမီးငရဲ အကြောင်း သီကုံးရေးသား သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ ဖိလစ်.ပီဘလစ် သီကုံးသော”ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်လုပြီ”)။
သင်သည်လည်း ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်လုနီးပါး သွေးဆောင်ခြင်းခံရနိူင်သည်။ ထိုအခါ သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲ “တနေ့နေ့ကျရင် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပါမည်ဟူ၍ ပြောနေ ပေမည်။ တနေ့နေ့သောအခါ၊ သခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီး၊ သခင့်အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပါမည်ဟု သင်ပြောကောင်းပြောနေမည်” ဤတွင် ကြီးမားသော အန္တရာယ်သည် “တနေ့နေ့”ပင်ဖြစ်သည်၊ စာတန်မာန်နတ်က သင့်အားကြာကြာစောင့်ဖို့ ပြောပါမည်။ စာတန်မာန်နတ်က၊ သင်သည်သင်၏ ကယ်တင်မည့်နေ့ရက်ကို စောင့်နေ မည်ကို သိထားသောကြာင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ခေတ်ကာလက သင်၏ ထာ၀ရအ သက်နှင့်သေခြင်းဖြင့် ကွဲကွာပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် အရံသင့်မပြင်ဆင်သောကြာင့် နောက်ကျနေမည်ဖြစ်သည်။ “ဖြစ်လှပြီ! “ဖြစ်လုပြီ! “ဖြစ်လှပြီ! ဟူသော အဂြိပ္ပမင်းကြီး ၏ငရဲအော်ဟစ်သံကို ကြားနေရမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်ရှိစဉ်၌ပင်၊ ဘုရားသခင်ကယ်မသ နားတော်မူပါစေသော်၊ ယေရှုသခင်အား၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်တာအပ်နှံရန် ကျွန်ုပ်သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကြောင့် ယေရှု၏အသွေးတော်၌ သင့်အပြစ်များ ကို ဆေးကြောရန် ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်။ ဤသည် သင့်အတွက် မိန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
“မရဏာနိူင်ငံ၌ ပြင်းပြစွာသော ဝေဒနာကိုခံလျှက် မျှော်ကြည့်၍၊ မီးလျှံ၌ ပြင်းစွာခံရသောကြောင့် အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မတော်မူပါ”
“ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ! ဖြစ်လုပြီ!”
-ဂရုဏာမဲ စီရင်ခြင်း သင်သည်တွေးကြုံရမည်
အချိန်ရှိစဉ် သတိမရှိ၊ ထာ၀ရနှောင်းနှေးရပြီ
(၁၈၉၅-၁၉၈၀. ဒေါက်တာ ဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော”အချိန်ရှိစဉ်”)။
ယနေ့ည မိတ်ဆွေ၊ ယေရှုဘုရား၏ အသွေးတော်၌ သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြာသန့် စင်ပြီး၊ ယေရှုကို ထာ၀ရအားကိုး ယုံကြည်ပါမည်အကြောင်း အကျွန်ုပ်ဆုတောင်း ပေးပါသည်! ဒေါက်တာရိုက်စ်၏ သီချင်းကို ကျွန်ုပ်သီဆိုပါမည်။ ကျွန်ုပ်သီချင်းသီဆို နေစဉ်၊ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်ဘုရားကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး ထာ၀ရအသက်ရှင်ဖို့ အလိုငှါ၊ အနောက်ဘက်ဆွေးနွေးခန်းသို့ သွားလိုက်ပါ၊ ထိုနေရာတွင် ဒေါက်တာ ကေကန်က၊ သင့်အားဆုတောင်းပေးပါမည်၊ ထာ၀ရအသက်နှင့် ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ပေးမည်ဖြစ် သည်။ ဤဓမ္မသီချင်းဆိုနေစဉ်၊ မိတ်ဆွေတို့ ဆွေးနွေးခန်းထဲသို့ သွားကြပါ။
-ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်အချိန်ရှိစဉ် သတိမထား
အပြစ်ထဲ နစ်မွမ်းနှလုံးသည်လည်း မှားယွင်းခဲ့ရ
အို၊ ကိုယ်တော်ရှင်၏ အမျက်ဒေါသ၊ ဝိညာဉ်ရုပ်သိမ်း
အချိန်သည် ရွေ့သွားကျိန်ခြင်း အင်္ဂလာသည်သာတွေ့ရ
အချိန်ရှိစဉ် သတိမရှိ ထာ၀ရနှောင်းနှေးရပြီ
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန် အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၁၃း၄၇-၅၀အထိ
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၉၅-၁၉၈၀ခုနှစ်၊
ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “အချိန်ရှိစဉ်” ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ် ဟောကြားသည်။
၁။ ပထမ၊ “အကျွန်ုပ်၏အပြစ်သည် မဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလော” ဟုဆိုသော၊ ကာဣန၏ ငိုကြွေးသံ၊ ကမ္ဘာ ၄း၁၃၊ ဟေဗြဲ ၉း၂၂၊ ထွက်မြောက်၂ဝး၁၂
၂။ ဒုတိယ၊ “ဝင်ခွင့်ပြုပါ! ဝင်ခွင့်ပြုပါ!”ဟု ဝင်ခွင့်တောင်းခဲ့ကြသော နောဧခေတ်တုန်း ကလူတို့၏ ငိုကြွေးသံ၊ ၂ပေ ၂း၅၊ ကမ္ဘာ ၇း၁၆၊ ဟေဗြဲ ၉း၂၇
၃။ တတယ၊ “အပြစ်မရှိသော သူ၏အသွေးကို အပ်မိပြီ”ဟု ဆိုသောယုဒရှကာရုတ်၏ ငိုကြွေးသံ ရှင်မဿဲ၂၇း၄
၄။ စတုတ္ထ၊ “သင်သွေးဆောင်သောအားဖြင့် ငါသည် ခရစ်ယာဉ်ဖြစ်လှပြီ” ဟူသော အဂြိပ္ပမင်းကြီး၏ ငိုကြွေးသံ တမန်တော် ၂၆း၂၈